अदालतको फैसला अटेर गर्नेमा प्रधानमन्त्री कार्यालय पहिलो – Setosurya
अदालतको फैसला अटेर गर्नेमा प्रधानमन्त्री कार्यालय पहिलो
बुधबार २०, पुष २०७३
कार्यपालिकाले नै मान्दैन न्यायापालिकाको फैसला
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसला वा आदेशलाई अटेर गर्ने र अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुन नदिनेहरु को-को होलान् ? यो प्रश्नको जवाफमा अदालतलाई अटेर गर्ने पहिलो संस्था प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय नै हो भन्दा फरक पर्दैन ।
अदालतलाई अटेर गर्नेहरुको सूचीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयपछि गृहमन्त्रालय र त्यसपछि मालपोत कार्यालय पर्छ । यसरी कार्यपालिकाले नै न्यायपालिकाको निर्णय कार्यान्वयनमा लगातार अवरोध गर्ने गरेको पाइएको छ । न्यायालयले गरेका निर्णयहरुको कार्यान्वयनमा सरकारको तर्फबाटै अवरोध हुने गरेपछि अरुले कसरी मानुन् अदालतको आदेश ?
अदालतलाई नटेरेका केही उदाहरण
नेपाल प्रहरीमा कार्यरत भद्र रायमाझीले आफुलाई ऐन विपरीत प्रहरी सेवाबाट निकालिएको भन्दै ०५६ सालमा सर्वोच्च अदालतमा उजूरी दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले त्यसको ५ वर्षपछि अर्थात् ०६२ चैत्र १५ गते फैसला सुनाउँदै तीन महिनाभित्र उनलाई पुर्नबहाली गर्न भन्यो । तर, ०६५ सालमा मन्त्रिपरिषदले अदालतको आदेशलाई अटेर गर्दै रायमाझीलाई बर्खास्त गर्ने गृह मन्त्रालयको निर्णयलाई सदर गरिदियो ।
सर्वोच्चले पुर्नबहालीको निर्णय गरिसकेपछि पनि मन्त्रिपरिषदले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले ०६५ सालदेखि ०७३ सालसम्म हरेक बर्ष गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । तर, गृहमन्त्रालय आफैं अदालतको आदेश अटेर गर्दै अघि बढिरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले ०६४ पुसमा महोत्तरी जिल्लाका मालपोत अधिकृत मुकुन्दप्रसाद खनाल विरुद्ध कारवाहीको फैसला सुनायो । र, फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्र पठायो । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले ०६४ सालबाट हरेक बर्ष दुईदेखि तीनवटासम्म पत्र पठाएर सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न भनिरहेको छ । ०७० सालमा बल्ल मन्त्रालयले सर्वोच्चलाई पत्र लेखेर ती व्यक्तिलाई कारबाही गरेको जानकारी गरायो ।
तर, जसलाई कारबाही गर्न निर्देशनालयले लगातार पत्राचार गर्यो, उक्त व्यक्तिलाई अझैसम्म कारबाही भने भएको छैन ।
२२५ फैसला अलपत्र, १५ सय ४२ निवेदन दर्ता
सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको ०५२ सालदेखिका फैसला अझैसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् । ०५२ देखि अहिलेसम्म सर्वोच्चले फैसला गरेको तर सरकारी निकायबाटै कार्यान्वयन नभएको फैसलाको संख्या २ सय २५ पुगेको छ । त्यसमध्ये सरकारका नाममा भएका अधिकांश फैसला कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतमा फैसलाबमोजिम न्याय पाउन नसकेको भन्दै अहिलेसम्म १५ सय ४२ वटा निवेदन परेका छन् । मुद्दाको फैसला भए पनि सरकारले फैसलाको कार्यान्वयन नगरिदिएको भन्दै उजुरी बढिरहेका छन् ।
अदालतको फैसला अनुसार न्याय पाउँ भन्दै निवेदन दिनेहरुको संख्यामा बृद्धि भएको छ, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अधिकृत कृष्णशरण लामिछानेले अनलाइनखबरसँग भने ।
सरकारी कार्यालयहरुमा आदेश अस्वीकार गर्ने, कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्ने प्रवृति हावी भएको अधिकृत लामिछाने बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारी निकायहरुवीच समन्वयन र सहयोगको अवस्था कमजोर हुँदा फैसला कार्यान्वयनमा सुधार आउन नसकेको हो ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले फैसला कार्यान्वयनका लागि राज्यलाई पत्र लेखिरहने र राज्यले भने कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउने समस्यामा वृद्धि भएको हो । निर्देशनालयका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका विरुद्ध फैसला भएका मुद्दाहरु कम कार्यान्वयन भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफूविरुद्ध फैसला कार्यान्वयनमा आलटाल गर्ने गरेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
यसपछि आफुविरुद्धको फैसला कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गर्ने मन्त्रालयमा गृह र त्यसपछि मालपोत कार्यालय रहेको छ ।
यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको बढुवा सम्वन्धी मुद्दाहरु कार्यान्वयनमा आलटाल हुने गरेको छ ।
सर्वोच्चले देश टुक्रिनबाट जोगाएको माधब नेपालको दाबी
पर्वतमा विद्युत प्राधिकरणको लापरवाही बढ्यो, जीर्ण पोलका कारण दुर्घटना बढ्दै
माअाेवादीका यी नेता, जाे एमालेसँगकाे एकताकाे विराेध गर्दै विद्राेह गर्ने तयारीमा छन्
प्रकाशको मृत्यूपछि यस्तो छ प्रचण्ड परिवारको अवस्था, रोकिएन सीताको आँशु
दाङमा गस्तीका क्रममा गोली लागेर नेपाली सेना घाइते
गण्डकी प्रदेशका कुनै समस्या छ्न् ? ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ मा फोन गर्नुहोस्
संसद बैठक भोलि १ बजेसम्मको लागि स्थगित
तिल्मिलाए मधेसी मोर्चा र काँग्रेस
पर्वत प्रशासनको घुम्ति शिविर : ५ लाख बढि खर्च गरेर ३७ जनालाई मात्र नागरिकता
पार्टी एकताको मुखमा बामदेवको रहस्यमय सक्रियता, के पाक्दैछ प्रचण्ड र बामदेवको भान्छामा ?
सहयोगको खोजीमा मृगौला पीडित, पर्वत खानीगाउँका सन्तोष भन्छन् – ‘मलाई बचाउनुहोस्’
प्रहरी सरुवा र बढुवामा पिएसओ आतंक
पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने बुद्धको योजना, सुरुवातमै ३ बोइङ किन्ने
पर्यटन मन्त्री अधिकारीको पार्थिव शरीरमा प्रधानमन्त्रीले ओढाए राष्ट्रिय झण्डा
बिशेष संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्र घोषणाको तयारी
कांग्रेसमा रामचन्द्र पौडेलले बबण्डर मच्चाए पछि देउवा समस्यामा, के होला अब ?